Fahatsiarovana ny Rain’ny Fahaleovantena Mozambika, Samora Machel · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Oktobra 2011 14:36 GMT
Hankalaza ny faha 25 taona nahafatesan’ ilay rainy mpanangana dia ny Filoha Samora Machel i Mozambika ny 19 Oktobra 2011, namoy ny ainy tamin'ny fianjeran'ny fiaramanidina tao Mbuzini, ao Afrika Atsimo tamin'ny 19 Oktobra 1986 izy. Nanambara ny governemanta fa “Taonan'i Samora Machel” ity taona 2011 ity.
@abcuna: Maty ny Mahery fo saingy mijanona ny zava-bitany. Mandria am-piadanana Samora Moises Machel Filoha Mozambikana Mahaleotena voalohany
@possesful: Tamin'ny taona 1986 i Samora Moisés Machel, filoha voalohany tao Mozambika no namoy ny ainy tamin'ny fianjeran'ny fiaramanidina, saingy araka ny nambaran'i mama makeba hoe “a luta continua” (mitohy ny tolona) [Miriam Makeba nihira tao amin'ity rohy ity]
@BenjamimNhumaio: Samora Machel no Filoha fa tsy “filohan'i ” Mozambika
@AlexMarime: Andro fifaliana ho an'ny tsirairay ao amin'ny Twitter ny fankalazana ny Jeneraly Samora Machel, rain'ny Repoblika Mozambikana no sady mpiaro ny fiandrianam-pirenena. Samora VELONA!
Mpisera Twitter @SuperCjr mampiasa tenin-jatovo Breziliana (angamba miresaka an-kolaka ny teny mitovitovy nataon'i Obama momba ny filoha Breziliana teo aloha Luiz Inacio Lula da Silva):
@SuperCjr: Samora Machel no tena lehilahy. #SamoraMachel
@cydia_buster: MANDRIA AM-PIADANANA SAMORA MACHEL. Mila anao ny vahoakanao ankehitriny
@CelsoDomingos: “Tsy voafaritry ny volon-koditra ny toetran'ny Mozambikana. Tsy misy ny vitsy an'isa, fa vahoaka Mozambikana avokoa”. Samora Machel
@Cle0_Princess: Mitantara zavatra tamin'ny vanim-potoanan'i Samora ny mamanay. Zendana tanteraka……
Sarivongana notokanana androany teo anoloan'ny tanàna ao an-drenivohitr'i Maputo, izay sarivongana vita amin'ny Halimo matevina , vita avy any Korea Avaratra. Maro ireo olona naneho hevitra mikasika ity tsangambato ity. Mpandray anjara Mozambikana voalohany tao amin'ny African Big Brother @DJWizardMZ, ni-tweet ity sary avy eny an-danonana ity (io ankavia io).
@DonCherinda: TANTARA MAHALIANA ny Tsangambaton'i Samora Moises !!!
Misy ireo mbola liana amin'ny antony nampianjera ny fiaramanidina izay nahafaty an'i Machel, izay mbola feno misitery. Inoana amin'ny ankapobeny any Mozambique fa tsy noho ny fahadisoan'ny mpanamory no nahafaty an'i Machel, araka ny valin'ny fanadihadiana nataon'ilay Afrikana Tatsimo nanampy ara-bola tamin'izany fotoana izany. Maro dia maro ny teorian'ny fikasan-dratsy, saingy tsy nisy voatonona tao amin'ny Twitter izany.
@cyrep: Iza no namono ny filohan'i mozambique Samora Machel 25 taona lasa izay? Mahatsapa aho fa ny fitondrana Afrikana Tatsimo teo aloha no mahavaly ny fanontanian'ny vahoakan'i mozambique.
@andradedundas: Tadiaviny afenina amintsika izany,fantatr'izy ireo tsara hoe iza no namono azy #SAMORA
@IrioP: Ho fantatrareo izay namono an'i Samora, rehefa maty daholo, na tsia, izay tafiditra tao anatin'ny raharaha. Raha lazaina amin'ny teny hafa, aza manelingelina anay amin'ity resaka ity.
@amliveonsafm: Graca Machel niantso ny governemanta mba hanokatra indray fanadihadihana mikasika ny fahafatesan'i Samora Machel